Yintoni imvume kwimithetho? | Umvuzo weZiseko
Ikhaya Umthetho Yintoni imvume kwimithetho?
The Umthetho woTyala loTyala ngo-England naseWales kwi-2003, kunye nomThetho wamaTyala oSondo eSondo eScotland ngonyaka ka-2009, chaza ukuba kuthetha ntoni imvume ngeenjongo zokutshutshiswa phantsi komthetho wolwaphulo-mthetho.
Umthetho uye wandisa inkcazelo yemveli yokudlwengula ukubandakanya zonke iinkcukacha zesini kunye nokwenza ukuba kubekho isenzo sokuthi "umntu (A) ungene ngaphakathi kwipeni lakhe, [kodwa kwakhona ngoku] i-anus okanye umlomo womnye umntu (B), mhlawumbi ngenjongo okanye ngokungenangqiqo, ngaphandle kwemvume yomntu, kwaye kungekho naluphi na inkolelo yokuba uB uyavuma. "
Ngaphantsi komthetho waseScotland, "imvume ithetha isivumelwano sokukhululeka."
"59. Icandelwana (2) (a) libonelela ukuba akukho sivumelwano simahla apho isenzo siqhubeka ngexesha apho isikhalazo singenakho, ngenxa yesiphumo sotywala okanye nayiphi na enye into, yokuvuma oko. Iziphumo zeli candelwana ayikokubonelela ukuba umntu akanakukuvuma isenzo sesondo emva kokuba esele nabuphi na utywala okanye ethatha nantoni na enxilisayo. Umntu usenokubusela utywala (okanye nayiphi na into enxilisayo), kwaye anganxila, ngaphandle kokuphulukana namandla okuvuma. Nangona kunjalo kwindawo apho enxile khona de aphulukane namandla okukhetha ukuthatha inxaxheba kwizenzo zesondo, nasiphi na isenzo sesondo esenzekayo, esenza njalo ngaphandle kwemvume yommangali. ”
Ithini imeko? Kumthetho woluntu, xa usenza ikhontrakthi ngokomzekelo, imvume ithetha ukuvumelana kwinto enye. Kumthetho wolwaphulo-mthetho, oko kuthetha into ethe kratya ngakumbi kwimvume. Omabini la macandelo asemthethweni afuna ukubandakanya umbono wokusetyenziswa gwenxa kwamandla ngaphakathi kwabo. Ukuchonga 'imvume' yenye yezona ndawo zinzima zomthetho wolwaphulo-mthetho. Zintathu izizathu eziphambili zoku.
Okokuqala, kunzima ukwazi ukuba kwenzekani engqondweni yomnye umntu. Ngaba udlala umtsalane ukuba ukulala ngesondo ngoku kulungile okanye nje isimemo sokuqala ukuthandana kunye nokuhlelwa kwesondo ngexesha elizayo? Ingaba isisemgangathweni okanye isilumko sokuba amadoda ahlale ephezulu 'ekukhuthazeni' abafazi ukuba bahlanganyele nabo ngokwesini kunye nabafazi ukuba bazithobele kwaye bathobele? I-intanethi ye-intanethi ngokuqinisekileyo ikhuthaza ukujonga oku
Okwesibini, izenzo zesondo zihlala zenziwa ngasese ngaphandle kwamangqina. Oko kuthetha ukuba kukho impikiswano malunga noko kwenzekileyo, ijaji kufuneka ikhethe ibali lomntu omnye ngaphezulu komnye. Ngokwesiqhelo kuye kufuneke bafake kubungqina bento eyenzekileyo ekukhokeleni kwisiganeko malunga nokuba kungenzeka ntoni engqondweni yamaqela. Babeziphatha njani epatini okanye kwindawo yokutyela okanye uhlobo lobudlelwane babo bangaphambili, ukuba bukhona? Ukuba ubudlelwane buqhutywa kwi-intanethi kuphela kunokuba nzima ukubonakalisa.
Okwesithathu, ngenxa yokubandezeleka okubangelwa ukuhlaselwa ngokwesondo, ummangali ukhumbule iinyaniso kunye nezimvo okanye iingxelo ezenziwe emva koko emva koko ziyahluka. Oku kungenza kube nzima kwabanye ukuba bazi ukuba kwenzekani ngokwenene. Le meko yenziwa nzima ngakumbi xa utshatywala okanye iziyobisi zidliwe.
Umceli mngeni kulutsha kukuba icandelo leemvakalelo zobuchopho liyabakhawulezisa ukuya kulonwabo lwasondo, ukuthatha umngcipheko kunye nokulinga, ngelixa icandelo lobuchopho elinceda ukubeka iziqhoboshi kwindlela enobungozi ayikaphuhlisi ngokupheleleyo. Oku kwenziwa nzima ngakumbi xa utywala okanye iziyobisi zikumxube. Apho kunokwenzeka ukuba abafana bafune 'imvume esebenzayo' kubudlelwane bezesondo kwaye balumke kakhulu ekukholelweni kwemvume xa iqabane linxilile. Ukufundisa oku ebantwaneni, bonisa oku kuhlekisayo imifanekiso malunga nemvume yekomityi yeti. Icoceke kakhulu kwaye iyanceda ukubeka ingongoma.
Imvume echaziweyo yindlela ekuphikiswana ngayo engavunyelwanga ngokucacileyo ngumntu, kodwa ithathwa zizenzo zomntu kunye nezibakala kunye neemeko zemeko ethile (okanye kwezinye iimeko, kukuthula okanye ukungasebenzi). Kwixesha elidlulileyo, isibini esitshatileyo sithathwa njengekunikwe "ukuvuma imvume" yokuba babelane ngesondo omnye komnye, imfundiso leyo eyayinqanda ukutshutshiswa kweqabane ngokudlwengulwa. Le mfundiso ngoku ithathwa njengephelelwe lixesha kumazwe amaninzi. Ukuba likhoboka lamanyala kungakhokelela kwamanye amadoda ukuba aye kubude obugqithisileyo ukunyanzela abafazi ukuba babandakanyeke kwizenzo zesondo ngaphandle kwemvume yabo. Yabona eli bali eAstreliya.
<< Ubudala beMvume Yintoni iMvume yokuSebenza? >>